Hatramin’ny fiandohan’ny taona : intelo nidina ny vidin-tsolika, latsaka be ny gazoala | NewsMada
Hatramin’ny fiandohan’ny taona : intelo nidina ny vidin-tsolika, latsaka be ny gazoala
Nahitana fidinana fanintelony izao, nanomboka omaly, ny vidin-tsolika ho an’ny mpanjifa. Latsaka be indrindra ny gazoala fampiasan’ny maro anisa. Foana tanteraka, nanomboka omaly ihany koa, ny famenoan’ny fanjakana ny vidin-tsolika na ny subvention.
Mihatra manomboka izao ny ajustement automatique des prix ho an’ny mpanjifa. Miankina tanteraka amin’ny fiovaovan’ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena sy ny sandam-bola ariary manoloana ny dolara izany. Manamarina ny fidinan’ny vidin-tsolika nanomboka omaly ho an’ny mpanjifa ny fihenam-bidy eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. 3.340 Ar izao ny lasantsy (3.460 teo aloha), 2.540 Ar ny gazoala (2.810 farany teo) ary 1.900 Ar ny solika fandrehitra (2.110 Ar teo aloha). Mety mbola hidina ihany ireo nefa mety hiakatra tampoka ! Nidina be indrindra aloha izao ny gazoala ( – 270 Ar), ka andrasana izay ho fiantraikany any amin’ny fiainam-bahoaka, toy ny amin’ny fitaterana.
Teo aloha, volabe natsentsina ny banga, nalefa any amin’ireo mpivarotra solika. 140 miliara Ar izany ny taona 2013 na 5,1 % tamin’ny tetibolam-panjakana ; tafakatra 232 miliara Ar ny taona 2014 na 8,3 % amin’ny tetibolam-panjakana ; ny taona 2015 vao nidina izany, 62 miliara Ar na 1,9 % amin’ny tetibolam-panjakana rehefa nihena hatrany ny vidiny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, latsaky ny 30 dolara izany ankehitriny. Navesatra amin’ny kitapom-bolam-panjakana io subvention io nanomboka ny taona 2010 hatramin’ny 2015. Alefa any amin’ny raharaha sosialy ny vola tamin’ireny, manomboka izao, raha ny filazan’ny fanjakana azy.
Ireo singa mamaritra ny vidin-tsolika
Nitondra fanazavana momba io vidin-tsolika ho an’ny mpanjifa io ny ao amin’ny minisiteran’ny Angovo sy ny solika. Betsaka ny singa mamaritra izany fa tsy ny vidin’ny baril ihany. Eo aloha ny dolara ividianana azy sy ny fitaterana ; solika voadio no hafarana miditra eto ; fampidinana ny vokatra tonga ao Toamasina ; vola aloa ho an’ny Gasynet sy APMF ; tahiry ao amin’ny GRT Toamasina ; fitaterana azy manerana ny Nosy. Hatreo, fandaniana aloa amin’ny vola dolara avokoa. Miampy fandaniana hafa : Fadintseranana, Fer, hetra sy ireo haba isan-karazany. Ambonin’ireo, mazava loatra, ny tombony alain’ireo mpivarotra solika nahazo alalana izay misy efatra eto amintsika. Ireo rehetra ireo, mamaritra ny vidiny any amin’ny mpanjifa.
Une réponse à "Hatramin’ny fiandohan’ny taona : intelo nidina ny vidin-tsolika, latsaka be ny gazoala"
hugues 03/03/2016 à 12:36
nidina be marina ny vidin’ny solika fa mba hisy fiatraikany @ fiainana ve izy io sa samy iziriziry @ tombotsoany daolo mpampiasa vola rehetra indrindra ny mpitatitra izay maika ny ampiakatra foana fa fafdy ny ampidina